Telegram Lite waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo taageerada codadka lagu hadlayo | Waxaan ka socdaa mac
Telegram Lite waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo taageerada cod-bixinta
Si ka duwan WhatsApp, Telegram wuxuu sii wadaa inuu cusbooneysiiyo ku darida shaqooyin cusub mid ka mid ah codsiyada fariimaha ugufiican ee aan hada ka heli karno suuqa. Waxqabadka ugu dambeeya ee codsigan uu na siinayo waa ku hadalka codka, shaqeynta noo ogolaaneysa inaan si fudud u abuuro shirar lala yeesho asxaabteena a aad ugu eg kan ay bixiso Discord muddo dheer.
Wadahadalka codka wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno qolal aan kula sheekaysan karno asxaabteena adoon isticmaalin codsiyada wicitaanka ee Skype oo kale ah, tusaale ahaan, maadaama hawlgalkeedu yahay mid fudud sida qolka oo la soo galo lana hadlo. Maamulaha kooxdu wuu awoodaa dejiso rukhsadaha mid kasta oo ka qaybgalayaasha ah, shaqo ku habboon in loo adeegsado codsigan si loo soo bandhigo barnaamijyo toos ah, lagu duubo soodhawrka ...
Waxqabadka kaliya ee aan weli imaan Telegram, ayaa ah Wicitaanada video, waxqabad ay Telegram shaacisay bartamihii sanadka, dhamaadka sanadkan, laakiin sidaan soo aragnay, nasiib daro suurtagal ma noqon.
Markaad aragto sida wanaagsan ee ay uga shaqeeyaan Telegram, iyo haysashada fursado fara badan oo wicitaanno fiidiyow ah lagu sameeyo, dadka isticmaala Telegram dan kama lihin in wicitaanada fiidiyowga aan la heli karin, inkasta oo runtii aan ka mahadcelin doonno marka la heli karo, maadaama ay noo oggolaaneyso inaan ka gudubno codsi aan hadda u isticmaalno hawsha noocan ah.
Telegram Lite waa nooca Telegram loogu talagalay mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican Telegram: bulshooyinka, oo ah codsiga ugu habboon ee lagu maareeyo bulshooyinka isticmaala badan. Markii la bilaabay cusbooneysiintii ugu dambeysay, Telegram Lite waxay noo ogolaaneysaa inaan fariimaha dejino, fariimo u furno bogag kala duwan, abuurno liisaska liiska ... Si aad ugu raaxeysato noocaan, qalabkeena waa in lagu maareeyaa macOS 10.12 ama ka sareeya iyo 64-bit processor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Telegram Lite waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo taageerada cod-bixinta
Maxaad ka beddeli lahayd MacBook M1?. Apple waxay rabtaa inay ogaato faallooyinkaaga